एउटी महिलाले तिमीलाई मन पराउछिन् भनेर कसरी लुकाउँछिन् | स्टाइलिश पुरुषहरू
एलिसिया टोमेरो | 09/06/2022 10:00 | जोडी र सेक्स
के तिमीलाई मन पर्ने केटी भएको छ, उसले पनि तिमीलाई मन पराउँछ, तर उसले लुकाउँछ? हामी साँच्चै मान्छे भित्रको थाहा छैन, तर लागि विभिन्न संकेत र कारणहरू तपाईं लुकाउन सक्नुहुन्न कि एक व्यक्तिले आकर्षित महसुस गर्छ र अनौठो व्यवहार गर्दछ।
पुरुषप्रति आकर्षित हुने महिलाले यस्तो परिस्थितिलाई लुकाउन वा नगर्न सक्छ, तर यदि उनको जोश धेरै बलियो छ भने यो पक्षाघात पनि हुन सक्छ। सबै प्रमाणहरू वा केही संकेतहरू भए पनि, यदि तपाइँ केटीले तपाइँलाई मन पराउनुहुन्छ वा किन उनले केहि बोल्दैनन् भनेर सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्न भने, हुनसक्छ यसको बारेमा केहि गर्नु पर्छ। आफ्नो जोश लुकाउने केटी पछाडि के छ पत्ता लगाउनुहोस्।
1 त्यहाँ संकेतहरू छन् जसले संकेत गर्दछ कि उहाँले तपाईंलाई मन पराउनुहुन्छ
2 एक महिलाले पहिलो कदम चाल्न हिम्मत नगर्नुको कारणहरू
3 एउटी महिलाले तिमीलाई मन पराउँछु भनेर कसरी लुकाउनुहुन्छ?
त्यहाँ संकेतहरू छन् जसले संकेत गर्दछ कि उहाँले तपाईंलाई मन पराउनुहुन्छ
छैठो संवेदना जुन हामीमा सधैं रहन सक्छ हामीलाई बताउँछ कि त्यहाँ केहि छ। त्यो महिलाले संकेतहरू उत्सर्जन गर्न सक्छ जसले स्पष्ट प्रकट गर्न सक्छ, के तिनीहरू स्पष्ट छन्? कहिलेकाहीँ तिनीहरू यति प्रमाणित हुँदैनन्, किनकि तपाईं लुकाउन चाहनुहुन्छ वा तपाईंसँग यसलाई समर्थन गर्ने कारणहरू छन्।
एक महिलाले पहिलो कदम चाल्न हिम्मत नगर्नुको कारणहरू
निस्सन्देह, यसले प्रसारण गर्न सक्ने संकेतहरू धेरै लुकाउन सक्दैन। यद्यपि, तपाइँ विश्वास गर्नुहुनेछ कि उनको व्यवहार र यी सबै अजीब छैन साना साना कुराहरूले तपाईंलाई देखाउँछ कि उसले तपाईंलाई वास्तवमै मन पराउँछ। एक महिलाले सम्भव भएसम्म लुकाउने प्रयास गर्नेछ कि उसले एक पुरुषलाई मनपर्छ, जबसम्म उसले कुनै कारणको लागि स्पष्ट लुकाउन प्रयास गरिरहेको छैन।
लजालुपन यो स्पष्ट कारण मध्ये एक हो। यस अर्थमा, तिनीहरूको असुरक्षा अन्वेषण गर्न आवश्यक छ, किनकि यो तथ्य धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा शासन गर्दछ। यस तथ्यको सामना गर्न वा एक कदम फिर्ता लिन पर्याप्त उपकरणहरूको अभाव पर्याप्त कारण भन्दा बढी हो।
त्यो महिला लजालु नदेखिन सक्छ, बरु अहंकारी, घमण्डी र आत्मविश्वासी। र यो हो कि, यद्यपि उनी पूर्ण सुरक्षा भएको व्यक्तिको रूपमा प्रत्येक विवरणमा हेर्छन्, हुनसक्छ उनीसँग यस्तो घटनाको सामना गर्ने सबै सीप छैन।
अर्को लक्षण जसले मानिसहरूलाई चाहन्छ, तर सक्दैन, किनभने तिनीहरूसँग ए अस्वीकार को भयानक डर। उनीहरूले सबै कुरा राम्रोसँग गर्न चाहेकोमा धेरै दबाब महसुस गर्छन् र अझै पनि उनीहरू विश्वास गर्छन् कि लामो समयसम्म उनीहरूका कार्यहरूले उनीहरूमाथि चाल खेल्न सक्छ।
भावनात्मक बुद्धि यसले नराम्रो अनुभव पनि खेल्न सक्छ, साथै आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गर्न सक्षम हुने पर्याप्त सामाजिक सीपहरू नभएको। यी अवस्थामा, महिलाले माथिका सबै गुणहरूमा ठोकर खान्छ र, कुनै सम्भाव्य समाधान नभएको, परिस्थितिबाट भाग्न सक्छ।
पुरुषले महिलालाई मन पराएको कुरा कसरी लुकाउँछ?
एक साहसी र आत्मविश्वासी महिलाले आफूलाई मनपर्ने केटालाई हेर्नेछन् र टाढा हेर्ने छैन। यद्यपि, जब उसले टाढा हेर्छ यसको मतलब उसलाई चासो छैन वा उसले विघटन गरिरहेको छ भन्ने हुन सक्छ। त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् किन तपाईंले यसलाई अलग गर्न सक्नुहुन्छ, र यसमा समावेश हुन सक्छ लाज। यदि तपाईंले उसलाई विचलित गरेपछि उसले तपाईलाई फेरि हेर्छ भने, यसको कारण हो कि उसले तपाईमा चासो राख्छ।
त्यहाँ धेरै संकेतहरू छन् जुन पत्ता लगाउन अध्ययन गर्न सकिन्छ कि त्यो महिला चासो छ कि छैन, यद्यपि यो जस्तो लाग्दैन। एउटी महिलाले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गरेको हुन सक्छ किनभने त्यहाँ उनको रुचि कोही छ, तथापि, उनी सधैं भ्रामक छिन्। यो लुकाउने कारणहरू हामीले पहिले नै तिनीहरूलाई समीक्षा गरिसकेका छौं, तर संकेतहरू तल विस्तृत छन्:
मुस्कान। यदि उनी सधैं तपाईप्रति राम्रो मुस्कान राख्छिन्, फरक छ, धेरै मायालु, शरारती वा नर्भस छ भने, यो स्पष्ट संकेत हो कि उनी तपाईमा रुचि राख्छिन्।
आफ्नो छविको ठूलो ख्याल राख्नुहोस्। यदि तपाईंले यस महिलालाई लामो समयदेखि चिन्नुभएको छ भने, तपाईंलाई लाग्न सक्छ कि उनको लुगा लगाउने तरिका परिवर्तन भएको छ, तपाईंलाई लाग्छ कि उनले अब धेरै लुगा लगाउँछन्। तपाईको लुगा र कपालको धेरै हेरचाह हुनेछ र तपाईले राम्रो अत्तर प्रयोग गर्नुहुनेछ।
बारम्बार एउटै ठाउँहरू वा सधैं तपाईंको सामाजिक सर्कलको नजिक छ। यो कुनै संयोग होइन जब यो धेरै पटक हुन्छ, र त्यो हो किनभने उनी तपाईंको आन्दोलनहरूमा रुचि राख्छिन् र सधैं ती मुठभेडहरूलाई उक्साउनेछ।
उसले तपाईलाई मन पराउँछ भने तपाईको बोल्ने तरिकाले पनि जनाउँछ। दया भनेको कुरा हो तपाईंले उसलाई भन्नुहुने सबै कुरामा उनी सधैं ध्यान दिनेछिन् र कुरा गर्दा पनि, कसरी हेर्नुहोस् उसले धेरै विवरणहरू बिर्सेको छैन आफ्नो कुराकानीमा।
तपाईंको शरीरको संकेतहरू जाँच गर्नुहोस्। यदि तपाइँ यसलाई प्रकट गर्न चाहनुहुन्न भने, सायद तपाइँको शरीरले केहि विवरणहरू दिनेछ। उदाहरण को लागी, यदि उनको शरीर र अनुहार सधैं तपाई तर्फ औंल्याइएको छ, यो किनभने उनको रुचि छ। यदि तपाइँ लगातार आफ्नो कपाल छोउनुहुन्छ वा तपाइँको कपडा ठीक गर्नुहुन्छ भने, यी पनि संकेत हुन्।
यदि तपाइँ बोल्दै हुनुहुन्छ भने ध्यान दिनुहोस् यदि उसले तिम्रो आँखामा हेर्यो भने वा अनुहारको अन्य भागहरू हेर्नुहोस्, जस्तै ओठहरू। यदि तपाइँसँग तपाइँको खुट्टा अलि टाढा छ र तपाइँ तपाइँको खुट्टा संग पनि फिडिङ गर्दै हुनुहुन्छ।
संकेत, सङ्केत, प्रमाण वा भेषमा नआउने कुरालाई ध्यानमा राखेर ती महिलालाई मन पराएर कसैले पहल गरेन भने सानो कदम चाल्नुपर्छ । जब शंका छ, त्यहाँ भन्दा राम्रो केहि छैन आफ्नो परिचय दिन वा भेटघाट गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यदि धेरै समय बितिसकेको छ र तपाईले धेरै समय पर्खन सक्नुहुन्न भने, तपाईले निर्णय लिनु पर्छ र विनम्रतापूर्वक त्यो महिलाले लुकाउन केहि छ कि भनेर पत्ता लगाउन प्रयास गर्नुपर्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: स्टाइलिश पुरुषहरू » फिट » जोडी र सेक्स » एउटी महिलाले तिमीलाई मन पराउँछु भनेर कसरी लुकाउनुहुन्छ?